Archive du 20181231
Ady amin’ny tsy fahamarinana Hihamafy ny tolon’ny 13 mey
Fahombiazana tanteraka ny hetsiky ny 13 mey nijoroan’ny vahoaka hiady amin’ny hosoka sy kolikoly tamin’ny fifidianana, ary tsy arakaraka ny fanatsatsoana ninian’ny sasany naely fa hisy fanakorontanana ary hiteraka ra mandriaka sy faty olona mihitsy, fa dia nilamina ny rehetra.
Tandrevaka tamin’ny fifidianana Tsy ho afa-bela ny CENI
Maika ny hanala ny zioga nitambesatra teo an-tsorony dia ny vokatry ny fifidianana kitoatoa nokarakarainy ny CENI, raha ny fihetsiny nihazakazaka namoaka voka-pifidianana ny herinandro teo.
Lisi-pifidianana Singa fototra nahatonga ny hala-bato ?
Efa hatramin’ny volana oktobra, nialoha ny handehanan’ny fifidianana filoham-pirenena fihodinana voalohany no efa nanakiana mafy ny lisi-pifidianana ireo nitaky ny fangaraharahan’ny fifidianana rehetra, indrindra ry zareo avy eo anivon’ny firaisankinan’ireo kandida.
Fikambanana Tanora Mandray Andraikitra Mitaky ny fanintsanana an’i Andry Rajoelina
Mandray anjara feno ary mankasitraka ny fitakiana ny rariny sy hitsiny handresena ny hosoka sy ny kolikoly tamin’ny fifidianana ny Tanora Mandray Andraikitra (TMA), tarihin’i Tsiry Andriamihantasoa,
Fandraisana fitarainana eny amin’ny HCC Hifarana anio
Ho fampiharana ny fanapahan-kevitra nivoaka teo anivon’ny fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana na HCC tamin’ny fihodinana voalohan’ny fifidianana filoham-pirenena dia tsy
Taona 2018 Ireo daty manan-danja teo amin`ny tontolo politika
Ora sisa dia hivalona ny taona 2018 ka indro fantaro ireo daty nanan-tantara teo amin`ny firenena indrindra teo amin`ny tontolo politika:
Firaisamonim-pirenena FTMF Hametraka fitoriana noho ny hosoka ara-pifidianana
Nandray anjara feno tamin’ny fanaraha-maso ny fiainam-pirenena teo nanomboka ny taona 2001 ny Fikambanana FTMF (Fikambanan’ny Tanora Mandala fahamarinana mba ho fampandrosoana firenena).
Taratasin’I Jean Nomen’i Jean inona ?
Fa nomen’i Jean inona daholo mihitsy ary ireto vahoakany ireto no dia minia mikimpy manao mody fanina be toy io ? Mba omeo ny tena fitiavana marina re izy ireo fa aza dia lavoina amin’ny fandraikirekena toy io a !
Asa fanaovan-gazety Maro ireo namana nandao ny taona 2018
Taona maloka ho an’ny tontolon’ny fanaovan-gazety teto Madagasikara ity taona 2018 ity. Maro ireo namana nindaosin’ny fahafatesana nanomboka ny volana mey hatramin’ny novambra. Lasa ny 5 mey ny namana Martin Ravonjisoanirina tao amin’ny RNM.
Zanaka vavin’i Rivo Rakotovao Nanambady ny sabotsy teo
Tontosa ny sabotsy 29 desambra teo tetsy amin’ny Ekar Faravohitra ny fitsofan-drano ny fanambadian’ny zanaka vavin’ny filoham-panjakana Rivo Rakotovao, Aina Miranto Rakotovao sy ny vadiny, Mamy Antonio Razafinimpanana.
Mpanao vakansy mivoaka any amin’ny faritra Vitsy tamin’ity faran’ny taona ity
Vitsy ireo mpiala sasatra nivoaka tany amin’ny faritra tamin’ity faran’ny taona 2018 ity, raha araka ny fanadihadiana natao tetsy amin’ny toby fiantsonana Andohatapenaka. Voakasik’izany ireo miazo an’i Mahajanga ka ireo tsy maintsy mody any amin’ireo fianakaviany ihany sisa no mandeha.
Foot à 6 The Best Fans Lasan’ny ekipan’ny Manchester United Panther
Nifarana omaly alahady 30 desambra 2018, teny amin’ny kianja sentetikan’Andohalo, ny fifaninanana baolina kitra lalaovin’olona 6 “The Best Fans” andiany faha-2 nokarakarain’ny Plate forme Gasyfoot.
Basket Be Seksiona Ambohidratrimo Nifarana ny sabotsy teo ny andiany voalohany
Nifarana tamin’ny sabotsy 29 desambra 2018 teo, teny amin’ny kianjan’ny RFI Ivato, ny andiany voalohany tamin’ny hetsika Basket Be nokarakarain’ny seksion’ny basikety baolina eny Ambohidratrimo.
Mitohy ny tantara, resena ny ratsy!
Mifarana tanteraka ny taona 2018 ho an’ny anio, fa ny tantara nentiny kosa hitohy amin’io 2019 ho avy io, raha ny fiainam-pirenena sy ny politika no zohiana. Mafana sy mangotraka ny toe-draharaha,
Raikitra indray ny fanafihana tetsy Ankadindramamy. Toeram-pivarotana toaka amin’ny ambongadiny no norobain’ny efa-dahy mitazona poleta roa.
Fitakiana ny fahamarinana
Fahombiazana tanteraka ary azo lazaina ho santatry ny fandresen’ny fahamarinana no nitranga tetsy amin’ny Parvis Analakely ny sabotsy teo. Tonga maro namaly ny antson’ny K 25 ireo tsy manaiky ny hala-bato na dia teo aza ny fandrahonana maro samihafa.
Boriborintany fahatelo Hentanina tsy hanaparitaka fako ny mponina mandritra ny fety
Manao hetsika manokana amin’ny fanadiovana ny tanàna ny Boriborintany fahatelo, kaominina Antananarivo Renivohitra amin’izao fetin’ny faran’ny taona sy ny taom-baovao izao.
Fakana sary sy kilalao ho an’ny ankizy Mifanaretsaka ny eny Analakely
Mitohy hatrany ny kilalao ho an’ny ankizy sy ny fakana sary ho fahatsiarovana amin’izao fetin’ny Noely sy ny faran’ny taona izao etsy Analakely.
Taona 2018 Matroka ny toekaren’i Madagasikara
Nanjombona sy niiba hatrany ny sehatra ara-toekaren’i Madagasikara ny taona 2018. Nanjaka ny fifaninanana tsy ara-drariny mampitaraina ny mpandraharaha tsy miankina izay mbola iainany hatramin’izao faran’ny taona izao noho ny fibosasahan’ny entana miditra avy any ivelany.